FFKM : Hiroso amin’ny dingana manaraka – MyDago.com aime Madagascar
Nanao « Point de presse » androany maraina tamin’ny 8ora sy sasany teny Andohalo ireo mpitarika ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eo Madagasikara (FFKM) , izay nahitana ny filohany ny Mgr Odon Razanakolona, Mgr Ranarivelo Jaona Samoela, ny Mpitandrina Rakoto Endor Modeste ary ny mpitandrina Lala Rasendrahasina. Fohy dia fohy ny fanambarana nataon’izy ireo tamin’izany . Raha fintinina dia toy izao : Ho fanohizana ny asa natomboky ny FFKM hoy izy ireo nampihaonana ny vondrona samihafa tamin’ny 3-4-5 May teo teny amin’ny CCI Ivato dia manamafy ny FFKM fa mandroso ny asa fampihavanana izay tanterahiny . Ankehitriny hoy izy ireo dia miroso amin’ny dingana manaraka isika, dingana fanatanterahana ny fampihaonana azy telo mirahalahy Filoha teo aloha sy ny Filohan’ny tetezamita ny Rayamandreny Filoham-piangonana. Eto am-pamaranana hoy izy ireo dia mangataka antsika rehetra hivavaka ho fanatanterahana izany, mangataka ihany koa ny ambaratongam-pitondrana sy ny mpanao politika hiara-hientana amin’ny fanatontosana izany.
Tsy nety nanambara ny toerana sy ny daty hanaovana izany fampihaonana izany ireto filoham-piangonana ireto. Tsy miova amin’ny 4F dia ny fiaiken-keloka, fahamarinana, fibebahana, fampihavanana ny tanjon’izy ireo.
31 pensées sur “FFKM : Hiroso amin’ny dingana manaraka”
Efa nibebaka angaha i saïd omar?
Dia tena tsy misy henatra mihitsy itony karazan’olona itony!
Ny ratsy nataonao tamin’ny 2009 dia ny vahoaka malagasy no mitondra azy anio.
Tsy ny conseil des évêques no ho mpitondra ny teninao raha miresaka famphavanana ianao.
Ny fampihavanana voalohany tokony ataonao dia ny fampihavanana ny kristianina. Fampihavanana ny malagasy taorian’ny nampidirana ny katolisisma teto Madagasikara izay nisy herisetra.
Nangina ary tsy mba niaro ireo Mpitandrina nenjehina ny katolika. Tsy mba taitra akory tamin’ny fandrahonana ny fiangonan’i Kristy!
Nomena vahana hono ny FJKM t@ andron-dRavalomanana ary dia niray fo sy saina t@ famoretana ny katolika tao Madagasikara ingahy benoit16. Moa ve tsy fialonana izany? Izay ve no asa nanirahana ny Fiangonana?
Anio, inona no tsy natao ny Fiangonana katolika?
Io ary mbola noho io resaka io no namotehana ny firenena tamin’ny 2009!
Afa-po fa sefo androany dia mody mihavana sy mampihavana?
Efa MBA niaky heloka moa ity Razana-BIBY ity ?
Ary inona no mbola idirany amin’io FFKM io?
Satria ve izy no lehiben’ny Katolika mibaby alika ? Tsy hagaga ahy raha toa miombo-kevitra amin’ny AV7 ity Jiolahy Razanakolona ity !
Raha hendry io « Kato-alika » « io, dia tokony izy no manao Fieken-keloka voalohany indrindra ,
ary manao fanambaràna ampahibemaso fa MELOKA teo amin’nyFirenena sy ny Mpiray Fivavahana aminy, satria nanaiky ny famonoana olona tsy an-drariny (2009).
Mbola resaka Fivavahana sy Politika ihany izao !
Raha misy roa na telo no paiso lo, tsy milaza izany fa ratsy daholo ny iray harona.Satria aza adino koa fa ny Pastera Paul Ramino dia TGviste be ary namitaka ny malagasy mihintsy tamin’ireny hoe fampihavanana ireny ka lavitra be an’i Masindahy Paôly.Misy milaza fa mizara telo hono izao ny katolika ao Madagasikara ka misy sampana iray izay manohana an’i OMAR dia vitsy noho iretsy roa hafa izay maro an’isa.Ka antsika no mieritreritra.
Tsy misy tsy nanota tamin’ity tany ity , ka aoka izay tsy meloka taminareo no hitora-bato , ka maninona ny olona no asaina hiaiky heloka amin’ny olo-meloka
Misaotra an’i Zanahary aho TSY MBA NANOME alalana olona HAMONO olon-tsotra TSY MANAN-TSINY mba hanome toerana ahy !
Ny tora -bato ataoa nie tsy noho izaho e ! fa ho FAMELAN-KELOKA ho an’ireo izay niharan’ny abibiana e !
Tsy ny tora-bato no tanjona, fa MBA ho anatra amin’ny FIEKEN-KELOKA natao!
Olona nanana andraikitra LEHIBE tramin’ireny FAMONOANA OLONA ireny ingahy io, ka ho MARIKY NY FIBEBAHANY sy FANGATANA FAMELANA eo antrehan’ny olona nampijaliny, NITONDRA FAISANA no tadiavina;
Rehafa manota ny Kirstianina, dia asaina manao FIKEN-KELOKA, ary asaina MANAO fivavavhana sy FANENENANA noho ny OTA nataony.
Toy izany koa no ANGATAHINA aminy ! FIBEBAHANA SY FANENENANA , indrindra olona heverina ho MPITONDRA FIVAVAVHANA izy!
Ary satria tamin’ny vahoaka sy ny Firenena no nanotàny, dia rariny sy hitsiny raha managataka famelàna amin’ny vahoaka sy ny Firenena izy, mba ho tsapan’ny vahoaka fa miaiky ny heloka nataony izy ary koa mibaboka , sy mangata-pamelàna ……..AMIN’NY VAHOAKA !
Fa mba te hametraka fanontaniana ihany koa aho e :
Mba hisian’ny FIFAMELAN-KELOKA ,
Moa ve i Andry RAJOELINA KASAINA NY HANAO….. FAMELAN-KELOKA amin’ny
– FIVAROTANA NY FIRENENA tamin’ny Frantsay
– Fiarahana mamoritra ny vahoaka malagasy TAMIN’NY fRANTSAY ,
– Ary koa Ny FATY OLONA TSY HAY ISAINA niseho hatramin’ny nahateo azy ?
– Ny fahoriana mianjady amin’ny vahoaka hatramin’ny nahateo azy ?
Raha araka ny Lalàna dia TOKONY ….ho tsaraina izy
Fa raha araky ny Fivavahana dia FIEKEN-KELOKA no tadiavina, ary raha misy ny Fieken-keloka dia, izay vao misy ny FAMELAN-KELOKA !
Ny olana momba ny famelan-keloka kosa anefa, dia miankina amin’izay niharan’ny heloka !
Ny itondrako io resaka io dia hoe:avereno amin’i Kaisara izay an’i Kaisara ary an’ny Zanahary izay azy.Ka noho izany
1./ Dia mamerina ny halatra rehetra nataony izy
2./ Dia tsaraina amin’ny lalàna velona
3./ Saziana araka ny didim-pitsarana mivoaka
4./ Ao anatin’io sazy io dia tokony hanao fieken-keloka sy fangatahana famelan-keloka.Eo ihany koa ny tokony hisafidianana izay sazy mendrika azy:asa an-terivozona na trano maizina mandra-pahafatiny na sesin-tany (nosy manga na nosy lava) mandritry… dia eo no mila manontany ny hevitry ny mpitondra fivavahana hoe:firy taona satria ho an’ireo izay kristianina dia i Job aza nigadra ary fantatra koa fa ny silamo dia masiaka kokoa.Asa ahoana ny hevitrareo?
hay ty Njara ty koa lozabe raha ankahala ka-toa-alika?!
Na nisy ny 2009 na tsia, na teo i Odon sy Benoît16 na tsia: ny anareo efa novolavolaina hatrany @ ny toerana nitaizàna anareo isany
Aza mandà, fa mandainga eto imasom-bahoaka izay miteny fa TSIA…
11 juin 2013 à 15 h 59 min
Toroy hevitra rey olon i Pastera Rasendrahasina (na izay proPESTA hafa misolo vaika ny akalana ao @ FFKM) mba hasaky hijoro hanafoaka an’i Msgr Odon Razanakolona aloha an!
Tsy hitako izay mahasarotra an’izany!!
11 juin 2013 à 16 h 16 min
Ny hatsiaka mamely sa voan’ny gripa tany amin’ny TNN, no toa maromaro indray izany tonga ato izany ?
Tsy misy vahaolana intsony raha izao no mitohy ê !
Ndao isika mianakavy hiady an-trano amin’izay fa tsy ampy ny loza ê ! Mpendaro daholo izay hitanareo tsy miaro tanindrazana, na tsy mahafinaritra anareo ny endriny !
Rehefa tapitra sy voaringana daholo ny malagasy dia ho tonga ny frantsay, karàna sy ny sinoa ary ny arabo, sônagaly haka ny toerana ! Efa ela loatra izy rehetra ireo no nilendalenda an’io lazaina fa tanindrazana io !
Resaka tsy mamokatra izany fivavahana sy famotsoran-keloka izany ! Rahatoa ka sady atao ambanin-javatra ny fampiarana ny Lalàna, no ampiana an’izany fanadiovan-tena manarapenitra amin’ny alàlan’ny vavaka sy rano ao anaty bénitier izany, dia ho lasa lavitra any …amin’ny fahaverezana ny vahoaka malagasy !
Raha tena tia tanindrazana marina ireo FFKM ireo, dien’ny rahampitso ihany, dia tokony manao izay tokony atao mba hiverenan’ny Filoha Ravalomanana hitodidoha hamonjy ny tanindrazany !
Tohizana ny dinika rehetra avy eo !
+1 à km
++ à km
hihihi -1 aux autres
tsotra be ny ahy Razanabiby d’efa biby izay fa aza afangaro @ vorona fihinana ny vorombe tsy fihinana,koa anatra ho anareo raha mieritreritra nareo…sao tafiditra ao anaty haraton’ny foza e!!!Samy notezaina t@ finoana isika fa angamba mba misy ihany no tokony tsy ho tazomina ireny fitaizana sasantsany ireny.
Raha i Razanakolona no ratsy dia aza kitihina ny mitovy finoana aminy ary na izaho aza tsy mirevy an’io,tonga tao ampiangonanay taty tamaga io fa tonga de tsy nivavaka aho fa naleoko nisotro,koa aza tsaraina @izany ny olona rehetra na KA-toa ALIKA io na MIBABY ALIKA IO tandremo fa ny VAVA TSY AMBINY VIDINA LAFO
Vakio io resak’i KTM sy RATSIMILAHO ireo fa misy vidiny be ireo rah mandinika ianareo,sao heverinareo fa i Domelina sy Razanabiby ary Benoit XVI irery no KATOLIKA.
fehiny aza miditra @ resaka ohatranizany fa sao ny TGViste no mibitaka.
Ny tanjona de tokany ihany na MIBABY ALIKA,PROSESITANY ny hanala an’i TGV sy ny forongony ….Aza mifanaratsy fa manjary faly ny FOZA
Misaotra Beloha a!!!misaotra an’i Hoaiza koa ary Ny akama!!
raha ny fahitako azy dia » tsisy mifanome tsiny e! ».
Azoko tsara hoe RAD lehibe no tompon’ andraikitra t@’ izao fahavoazana izao ary mbola IO izy IO,
alao daholo ny fonareo fa AZA MANONTA, olon’Andriamanitra izy koa AZY SY ANDRIAMANITRA
NY AZY.MITEZERA FA AZA MANONTA e!!!
Za koa katolika fa tsy MIRAY TSIKOMBA ARY TSY HO TOMPON’ANTOKA @’IZAY TSY METY HO
FAMOTEHANA NY FIRENEKO TOY IZAO AHO , SANATRIA!!!!!
NY AHY NY ANDRASAKO DIA NY BAINGA MIVADIKA ô!!!!hatr@’izao aloha mbola blabla ………
Fizotry ny fifidianana ary mampiantra ny lalàna velona no tokony hezahin’ny rehetra fa aoka izay ny fampiasàna ny ny FFKM satria hita fa tsy nahavita ninoninona ireo hatramin’izay!!!(4 taona mahery izay).
Iza indray no mitady hanosika an’ireo hanao izany fampihaonana izany?Raha mahavita azy ianareo FFKM dia ny HMF no tokony ampianareo hatramin’ny farany fa aoka izay ity mody mitady vaha-olana lava tsy mahomby ity.
Hahavita inona intsony izany fampihaonana izany????Handeha ahmahan-dalitra ny vahaoka indray?
Efa nifanaiky samy lehilahy lehibe izao daholo fa atao ny fifidianana ka aoka izay ry FFKM ny sinema anareo!!!LEO BE NY OLONA.
Raha amiko manokana dia tsy tokony mirahara izay hevitra aroson’ny frantsay intsony ianareo satria dia efa hita mivandravandra be ny maha-sefon’i lavanify an’ireo.
Ny zavatra tokony ataon’ny olona dia ny tsy mividy solika eny amin’ny total intsony fa io no tena mihinana sy manararaotra ny mahantra aty amin’ny tany mahantra aty.
NY dikan’izany dia tsy mila kamo mitady toeram-pivarotana solika hafa fa mila mazoto.Zoto-po izao no tena ilaina fa tsy moramora lava eny.
Dorana no mety aminy fa ny olona anie ry Bema tsy mbola afaka ny hiambo
fa afaka hitady lavitra fa ny lasantsy lafo e!zara aza misy eo mba tsy hitadiavana lavitra
handaniana lasantsy ( vola ).
Atao @ fanaovana azy izy omena ny anjara afo-beany koa dia ny ety an-tany HISANTARANY AZY RAHA
MBA AHATSAPA TENA.
TSY NAHALALA NY FRANTSAY VE NAREO e????TSIVALAHARA!!manao tsindrio fa lavo, mitady hirika
foana HANJANAHANA fa dia ireto ALIKA MPISOLELAKA KOA MISY DIA MISY ARY FANTATRA HOE » IZA
IZY IREO « ! MAHONENA!!!!!
Tsy diso ny filazanao Ranavalona kanefa ireo manana 4X4 dia afaka miafy kely mba hijalian’i Total.
….ka hainao moa IZA avy ireo manana 4.4 ao @ tanana ao???
ny fangalarana @’ireo olona tsotra ( tsy foza an)tsy lazaina intsony,
ireo izay mba nana izany 4.4 izany akoatra ny FOZA aza moa dia robaina andro atoandro tsisy bedy.
Ity hoe fifamelana sy fampihavanana ity aloha dia hitako manosika ny olona handray anteddrony ka vao maika miteraka fisarahana. Sady lasa fitoniana @ A/tra ilay izy fa tsy @ vahoaka Malagasy nahazo ny loza. @ izay inty mpampihavana dia,izy indrindra no mila mifona eo antre hoan’ny Malagasy fa ny havendranana sy ny fahambaniantsainy no nahatafiditra ny firenena ho latsaka lalina toy izao.
Dia tena tsy manana olon-kafa mihitsy ve ny Katolika fa itony Jiolahy itony no,lehibeny.
Efa hanao ihany ny FFKM dia éto Antananarivo,ny finoana a fa tsy Any an-kafa, hanao teto ka miaraka @ Rajoelina eo indray hisamborana ny filoha Ravalomanana. Dia ireto AT ireto tsy manaiky raha tsy hisambotra Nefa ry zareo no tena mpangalatra sy mpamono olona.
Ho voa ihany koa i Ravalo raha manaiky izany hoe ho ory Any Nosy be izany. An’isan’ny kianiko @ i Dada dia ity finoana izay voalazan’i Rajoelina ity, dia manao Sonia , Nefa fantatra fa tsy hitako a ny fifanarahany ilay mpanogam-panjakana. Be loatra ilay finoana ka te hono foana …. Mandate a aho anefa fa tsy hilatsaka @ izany fandrika izany ny filoha. Ary ny fihaonana raha tsy éto Antananrivo tsy azo tanterahina.
Dia INONA indray hono ny dingana manaraka ?
Ny miaramila hanao fanambaràna @ 26 Juin fa izy no hitondra ny Firenena ? sa, ny PM ?
Sa ny Gouvernement IRAY MANONTOLA ?
13 juin 2013 à 16 h 59 min
Tsy mety afaka ahiahy ny tena mahita ny ffkm mety tarihan’ity vorontsiloza odon ity sady kely loha (nety nitaina ny afon’ny fanonganam-panjakana ) ary izao vao sihahina dia midoroboka eo anolohan’ny mpanao gazaty sy mpaka sary ohatrany mba hitondra zava-baovao !ity lehiben’ny fiangonana katolika ity ve manan-kolazaina sa hanao lamesa mampatory ny Vahoaka !
Satria tsy hitako amin’ny fomba sy amin’ny hery avy aiza no hampodiana ny Filoha RAVALOMANANA MARC eto Antanindrazana !
Itony odon itony no tokony hihaiky ny fahotana sy mibebaka noho ny ratsy vitany niaraka taminireo mpanongam-panjakana izay mbola mampandray ni kihony ny Malagasy !
Dia olona niaranamono Malagasy sy nanapotika ny toe-karenan’ ny Malagasy ve dia hekena hampibebaka ireo niara-nanao ratsy taminy !
Tokony mba hahay manda ny voankazo lo atolotra Antsika Isjka , fa ho heverin’ny Vahoakan’izao Tontolo o toan’ny manan-tsafidy sy tsy mahay mandinika ny fiainam-pirenentsika !
Diaity odon , tranon’ny ratsy ity ve no hantenaintsika hitondra soa sy ny fahamarinana ho Antsika ?
Ranom-potaka ve no hidiovantsika ?
Hoy ANDRIAMANITRA Amintsika :
» IZAHO NO ANDRIAMANITRAREO KOA AZA MIHERIKERIKA FA MANARAHA AHY ! »
FFKM « … RAHA TSY HITENY IANAREO DIA HITENY NY VATO … »
mandeha ny eritreritra ny hitaony ny Malagasy rehetra sembana ara-batana IHANY hidinika ny tokony ataon’ireo tsy sembana ara-batana mba handrosoan’ny Firenena Malagasy
FFKM « raha tsy hiteny ianareo dia ny vato no hiteny … »
raha tsy mivoaka ny maha-marina ny fahendrena malagasy amin’ny fahitana vahaolana araka ny rariny sy ny hitsiny, dia ny Malagasy sembana ara-batana IHANY no tokony hidina an-dalambe mitondra ny hevi-bahoaka.
Précédent Article précédent : Projet de loi ?
Suivant Article suivant : NY FRANTSAY NO FOTOTRY NY KRIZY TETO AMINTSIKA